Ergadii isaga baxday shirka Jowhar oo maanta lagu wado iney dib shirka ugu laabtaan – STAR FM SOMALIA
Ergadii isaga baxday shirka Jowhar oo maanta lagu wado iney dib shirka ugu laabtaan
Ergada ka qeyb galayso dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee isaga baxay shirka maamul u sameynta labada gobol ayaa maanta la sheegay iney dib ugu laabanayaan shirka gogashiisa fidsan tahay magaalada Jowhar.
Kulamo gaar gaar ah oo saacado qaatay oo ka dhacay magaalada Jowhar ayaa waxay sababeen iney isku soo dhawaadaan ergada shirka isaga baxay iyo xubnaha wasaarada arimaha gudaha ee ku sugan magaalada Jowhar.
Dadaaladaasi kadib ayaa waxaa la qanciyay ergadii shirka iska baxday waxaana maanta lagu wadaa iney dib shirka ugu laabtaan.
Sababaha keenay in ergada shirka isaga baxaan ayaa lagu sheegay iney tahay arimo dhaqaalo, maadaama ay jireen qorshe dhaqaalo joogto ah lagu siinayo ergada shirka ka qeyb galayso.
Ergada shirka maamul u sameynta ayaa la filayaa iney ansixiyaan dastuurka maamulka uu yeelanayo, calanka iyo magaca loo bixiyaa maamulka labada gobol loo sameynayo.
Ergada ayaa kadib waxaa laga doonayaa iney soo xulaan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi uu yeelanayo, waxaana kadib xigaya doorashada afhayeenka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
Wasiirka arimaha gudaha xukuumada Soomaaliya Craxmaan Odowaa ayaa xalay sheegay in xukuumada ay qorsheysay in bartamaha bishaan lasoo afmeeraa dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Taliyaha Nabadsugida oo shaqadii ka eryay 1,500 oo ka mid ahaa ciidamada NISA
Shuruudaha looga baahan yahay dadka Doonaya ka mid noqoshada Xubnaha Aqalka Sare ee Galmudug?